Nhau - Mashoko "news" - Toolsdecuisine.com
nhau - news
03 December, 2018 • Bulgaria • nhau • Shanduro yeBulgaria • Bulgarian version
Mushure mokushandurwa kweChirungu neArabic, tinozvirumbidza kuunza shanduro yeZebhuku reDhidhidha reChishanu reBulgaria! Kana iwe uine shamwari dzeBulgaria zviri pachena kuti nguva yekushandisa bhodhi "Share" ... ➡️https: //bg.outilsdecuisine.com ODC team
Toolsdecuisine rinotanga iyo Arabic version!
21 November, 2018 • arab • nhau • utsva • traduction • arabic version
Mushure mokunge shanduro yeChirungu (en.outilsdecuisine.com) isu tinozvirumbidza uye tinofara kuzivisa kuiswa kwesaiti yedu mune dzimwe nyika dzeArabhu, ️ zvakashandurwa zvakazara muchiArabic uye nekuratidzwa kwematengo mune mari yeimwe nyika idzi ( Dirham yeMorocco, Dinar yeAlgeria etc ...). ➡️ ar.outilsdecuisine.com Kana uine shamwari dzinogara muMaghreb kana kuMiddle East somuenzaniso, inguva yekugovana iyi mashoko akanaka navo? ➡️ ar.outilsdecuisine.com ODC team
Mutsva muNhengo: BcommeBB
04 November, 2018 • BcommeBB • mwana • mwana • amai • nhau • mubatsiri • ushamwari • mwana
Isu tinofara kuzivisa ushamwari hutsva pakati peShare Tools yedu yeChechi uye nzvimbo ye www.bcommebb.fr Nzvimbo iyi yakatsaurirwa kunyika yevana nevana ve0 kune makore 6 asiwo kumadzimai avo. Sei kubatana kwakadaro? Ikokubatanidza kwekutanga pakati pewebsite yedu neBcommeBB ndiyo kudya (mwana). Zvechokwadi pa Toolsdecuisine.com tinopa midziyo yakawanda kuita kuti upenyu hwako huve nyore mukicheni uye kuita zvikafu zvakanaka. Iyi midziyo inogona kushandiswawo kugadzirira kudya kwevana. Mune imwe nzira iyo nzvimbo BcommeBB inopa chikwata chakatsaurirwa kudya.
MIKUTO YOKUTANGA KWENYIKA "MVURA YOSE" PROJECT
14 September, 2018 • mutsa • Charity Water • Mvura Yevose • Don • kunwa mvura • Mozambiki • nhau
Sezvaunoziva isu takamisa mashomanana mashoma apfuura chirongwa che "Water for All" (kana iwe hausi ikozvino, verenga izvi). 5% yega yega yega yakaiswa panzvimbo yedu www.outilsdecuisine.com inowanzopiwa kune sangano Charity Water inoshanda kuti ipe ruzivo rwekunwa mvura yevanhu vose. Yedu (uye naizvozvo iwe!) Kuedza kwekutanga kunobhadharwa sezvo tangobva tagamuchira email kubva kwavari vachitsanangura kuti mari ikozvino inoshandiswa kubhadhara purojekiti muMozambique. Sezvavanotsanangurira kwatiri: "Mozambique yakawana hondo yehurumende ine ...
Kushandisa zviziviso kune ushamwari!
16 August, 2018 • nyevero • functionality • nhau • ziviso • shandisa zvidzidzo • utsva • kusunda
Zita racho haringakuudze chero chimwe chinhu asi iwe unowanikwa pafoni yako kana kombiyuta yako ... The Push Notification ishoko redu rinowanikwa pa smartphone yako screen kana pc yako kukuudza chimwe chinhu chitsva, an offer, a tip etc ... Nzvimbo yedu Outilsdecuisine.com haina kubva pakutonga uye inopawo kuti isayirire mazaziso ayo ;-) Izvi hazvisi nyore zvakare, kana pa smartphone yako kana kombiyuta yako (kana piritsi), enda kungosi yepaiti yedu www.outilsdecuisine.com (rezorodza kana iwe uchitove uripo), ...